ဆေးလိပ်ကို ဘာကြောင့်ဖြတ်သင့်တာလဲ? ဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲ? | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
ဆေးလိပ်ကို ဘာကြောင့်ဖြတ်သင့်တာလဲ? ဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲ?
လူကြီးမိဘတွေ ဆုံးမနေကြဖြစ်တဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ရင် လူဆိုးဆိုတာက မမှန်ပါဘူး။ ဒါ့မယ့် ဆေးလိပ်က မူးယစ်ဆေးဝါးထဲပါနေတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တာကတော့ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း မှန်ပါတယ်။
နေရာတိုင်းမှာ တန်ဆေးလွန်ဘေးရှိတာကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံပဲ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ကို ဘာကြောင့်ဖြတ်သင့်တာလဲ?
ဆေးလိပ် သောက်တာကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ နာတာရှည် လေပြွန် ရောင်ရမ်း၊ ရင်ကျပ်ပန်းနာ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် အဆုတ်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက် စေနိုင် ပါတယ်။
ဆေးလိပ် သောက်တာကြောင့် ပျှမ်းမျှသက်တမ်း ၁၀ နှစ်ပို တိုသွား ပါတယ်။
ဆေးလိပ် သောက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အချိန်ကြာတတ်ပြီး ကလေး ပျက်ကျနှုန်း များပါတယ်။ လမစေ့ မွေးတာ ဒါမှမဟုတ် ပေါင်ချိန် မပြည့် မွေးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ် သောက်တဲ့ အမျိုးသား တွေမှာ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်တတ်သလို သုတ်ပိုး အရည်အချင်း တွေလည်း ညံ့ဖျင်း တတ်ပါတယ်။
သင် ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတွေရောဂါ ရတတ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို ၁၀၀ ကျပ်ပေးရတယ်ထားပါတော့။ တစ်နေ့ကို ၁၀ လိပ် သောက်မယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်စာအတွက် ၃၆၅၀၀၀ ကျပ် အပိုငွေကုန်ပါတယ်။
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုစာတာတွေ မဖြစ်ရလေအောင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ ဆေးလိပ် သောက်တာကြောင့် collagen ထုတ်လုပ်မှု ၄၀% ကျဆင်းသွားပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အရေး အကြောင်းတွေ ပေါ်တတ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်တာကြောင့် အနံ့နဲ့ အရသာ အာရုံတွေ ပိုကောင်း သွားပါတယ်။
ဆေးလိပ်စွဲနေတဲ့ အကျင့်ကို ဖြတ်နိုင်တာကြောင့် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာပါတယ်။
ချောကလက်အနက်ရဲ့ အရသာက ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အခါရတဲ့ ခံစားမှုအရသာနဲ့တူပါတယ်။ဆေးလိပ် သောက်သူတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ရတာလို့အကြောင်းပြချက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ချောကလက် အနက်ဟာ ဦးနှောက်တွင်း ဆီရိုတိုနင် (Serotonin) ပမာဏကို သဘာဝနည်းကျကျ မြှင့်တင်ပေးပြီး စိတ်ကို လန်းဆန်းစေကာ ၊ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချပေးပါတယ်။
တကယ်လို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ သောက်ချင်လာပြီဆိုလျှင် ဆယ်မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ကြည့်လိုက်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ကနေ လိုအပ်နေတဲ့ဓာတ်တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် အလေ့အကျင့်တစ်ခုကို ဖြတ်ပစ်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်အလိုမကျဖြစ်မှုတွေ ခံစားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအချိန်မှာ တခြားအစားထိုးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို စဉ်းစားထားပါ။ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း၊ ကာရာတေး၊ ဒါမှမဟုတ် တရားထိုင်တာ ဒါမှမဟုတ် တခြား ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်ဆေးလိပ်သောက်နေကျလူတစ်ယောက်အဖို့ဆေးလိပ်သောက်ချိန်တွေမှာ လက်မှာ တစ်ခုခု လိုနေတာမျိုး၊ ပါးစပ်ထဲမှာ တစ်ခုခုလိုနေတာမျိုး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီးကရက်နေရာမှာ ပီကေဝါးတာဖြစ်ဖြစ်၊ သကြားလုံးစားတာဖြစ်ဖြစ် နဲ့အစားထိုးပေးပါ။
အယ်လ်ကိုဟော ပါဝင်တဲ့ ဖျော်ရည်ယမကာတွေကတော့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်တုန်းမှာ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့နေရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ခဏလောက် ရှောင်နေပါ။ ပါတီလိုနေရာမျိုးတွေကိုလည်း ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Live-Style Read 65 times